Sina avo lenta ivelany IP65 4x200w 800w COB Led jiro jiro fanamboarana sy orinasa | Mihoatra
IP65 4x200w avo lenta avo 800w COB Led jiro jiro
Ny hazavana ivelany IP65 4x200w 800w COB Led jiro hazavana dia herinaratra 800W & hazavana mihosin-trano eny an-kalamanjana avo lenta, kalitao milamina ary saika 0 no mitaraina rehefa namidy teny an-tsena nandritra ny 4 taona. Ny maso tsirairay dia taratra 200W COB izay manome loko fotsy tokana na CW / WW 2in1 amin'ny safidy. Ny maso tsirairay dia azo ahodina tsy miankina amin'ny tanana amin'ny 26 °.
55 ° sakany zoro tohana amin'ny alàlan'ny famirapiratanany avo dia afaka manasa faritra lehibe., Fidio ny mari-pana loko amin'ny fantsona misy. Fiolahana manalefaka tsara amin'ny tabataba malalaka sy ambany. Ny data data LUX @ 3M feno amin'ny 6200
Tena jiro mamirapiratra sy avo lenta tsy misy rano ity, nampiasaina tamin'ny asan'ny Lalao Olaimpika Korea 2018 tamin'ny mari-pana momba ny tontolo ivo -25 degre. Vokatra fanaovan-jiro dingana mimenomenona aotra izy hatramin'ny nanombohana amidy amin'ny tsena tamin'ny taona 2017
Loharano nateraka 4 pcs 200W COB White 6000k sy fotsy mafana 3200k 2in1 nateraka miseho Touch Display
Sudin'ny zana-kazo 60 ° Data ao amin'ny foibe / Out Sockets XLR 3-pin
Fanjifana herinaratra 800W Socket Power Powercon tsy misy rano miditra / mivoaka
Fomba fanaraha-maso Dmx512 / Auto run / Master andevo / Feo navadika famaritana
Mode DMX 2/9/16 Channels lafiny 420x420x155mm;
Toetoetra NW 12,5 kilao
Fan fanitsiana hafainganam-pandeha mifanaraka amin'ny mari-pana mitarika Fonosana mahazatra: baoritra; tranga sidina raha azo atao
Ny bracket dia nahazo diplaoma tamin'ny 10 °
Ny famirapiratana avo sy ny mari-pana amin'ny loko azo ovaina Fanamarinana
0-100% starma tsy azo ovaina manara-penitra CE, ROHS
F: Raha manana olana ny zavatra novidiako dia inona no tokony ataoko?
Re: Ny vokatra rehetra atolotray 2 taona fiantohana, rehefa misy olana ny jiro, voalohany, azafady mifandraisa amin'ny varotra ary omeo anay ny antsipiriany momba ny olana amin'ny famaritana, sary na horonan-tsary. Hiresaka haingana izahay ary hanampy anao hanazava ny olana ary handefa kojakoja malalaka. Raha toa ka tsy misy fiantohana ny vokatra, dia hanao toy izany koa ny fomba fifandraisana, hafa ny ampangaina.
F: Manana agents na biraon'ny firenena hafa ve aho?
Re: Tsia, mivarotra mivantana ny ozinina izahay, amin'ity fomba ity hanohanana ny olona ny vidiny tsara indrindra.
F: Fitsapana tsara ve ny jiro alohan'ny fandefasana amiko?
Re: Eny, 100% azo antoka fa ny jiro rehetra dia nolalovan'ny QC ary hosedraina tsara amin'ny ICQ, mandritra ny 48 ora fitsapana fahanterana, fitsapana mihantona, fitsapana hovitrovitra ary fitsapana hafanana avo.
Teo aloha: 2021 vokatra vaovao 2000W Led strobo mihetsiketsika loha hazavana sehatra hazavana matihanina
Manaraka: Fivarotana mafana Mini andian-dahatsoratra mihetsika lohan-doha miaraka amin'ny herin'ny 250W 311W sy 380W